Ankadilalampotsy Valo lahy nanendaka mpivady avy niasa
Mitaraina mafy noho ny firongatry ny mpanendaka ao amin’ny faritra misy azy ny sefom-pokontany sy ny lefiny ao Ankadilalampotsy, kaominina Ankaraobato.
Roa na telo isan-kerinandro mantsy ireo lasibatra raha kely vokatry ny tsy fisian’ny herinaratra manazava ny tanàna. Ny kaominina efa vonona ny amin’izay anjara asany raha ny nambarany saingy mbola andrasana kosa ny JIRAMA. Vao tamin’ny zoma lasa teo, ohatra, dia mpivady avy niasa avy eny Andraharo no nendahina valolahy teo amin’ny SAMAF. Tapitra nalain’ireo jiolahy avokoa vokatr’izany ny peratra teny an-tanan’ilay Ramatoa sy ny poketra nentiny raha mbola novonoin’izy ireo nitsahiny tamin’ny tany ihany koa ilay rangahy ka voatery naiditra hopitaly mihitsy. Misy mbola ankizy vao misondrotra ireo mpanendaka raha ny fantatra izay nanery ilay Rangahy mba hamoaka vola saingy rehefa tsy nahita izay notadiaviny izy ireo dia nanampatra ny heriny. Tsy mbola afaka miasa moa hatreto ilay raim-pianakaviana na dia efa nivoaka ny hopitaly aza. Tsy maintsy hatao “scanner” mantsy ilay lohany voahitsaka, raha ny fantatra hatrany.